Wararka Maanta: Talaado, July 11, 2017-Xiritaankii tartankii Ururka SOSCA ee Kubada Cagta - Toronto, Canada
Wararka Maanta- Talaado, July 11, 2017
Xiritaankii tartankii Ururka SOSCA ee Kubada Cagta - Toronto, Canada
Talaado, July 11, 2017 (HOL) - Ururka SOSCA ee ka dhisan dalka Canada ayaa qabanqaabiyey tartan cayaaraha Kubada cagta ee sanadka 2017 laguna qabtay magaalada Toronto ee dalka Canada.
Tartanka waxaa la daah furay bishii Juun 28, waxaana ka soo qayb galay 12 kooxood oo ka kale socda magaaloyinka, Washington, Rochester, iyo buffalo oo intaba ka ymid dalka USA, iyo 9 kooxood oo kale yimid Toronto, Hamilton iyo Kitcner oo intaba dhaca gobolka Ontario ee dalka Canada. Sida kalo waxaa ka soo qayb galay wafdi heer sare ah oo ka soo socda ururka Seuki oo ka dhisan dalka Sweden , wafdigaan oo u hogaamaniyey Guddomiyaha Ururka Wali Malin iyo Gudoomiye xigeenkiisa isla markaan aha wariye wax ka qora sportiga Somaliyeed Mudan Abdinasir Sola.
Tartanka oo is aragii ugu danbeeyey lagu qabta garoonka caalmiga ee Centennial Park ee ku yaal galbeedka magaaladaan Toronto, ciyaartii kama dambeeynta aheyd ee FINALka ayaa isku soo baxa labada kooxood oo kale ah Kitchener iyo Rochester ( New York) , ciyaartaan oo aay ka soo qayb galeen dadweyna aad u fara badan iyo madax somaliyeed oo ka mid ahaayeen, Senator Shukri Adan cameey, Xildhibaan Maryan Ahmed Haruun iyo Daljire Abyan Ladane.
Ciyaartaa oo isga hor yimadeen Kitchner iyo Rochester oo aad u xiiso badan ayaa waxeey ku dhamaatay bar baro min 3 gool, waxaana lagu kale baxay laadka xorta ah (Rigoro) oo aay ku badasay kooxda Kitchner oo dhalisay 3 gool iyo Rochester oo keenta 2 gool.
Gudomiyaha SOSCA Mudan Abdirisaq Hussien Geedi ayaa qodbadii xiriitaanka uu mahad celiyey daawadayaasha ka soo qayb galay, madaxda soomaliyeed, mediayaha somaliyeed oo ka mid yihiin SNTV iyo Hiiraan Online, deeq bixiyaasha , howl wadaneeda ururka oo suurta galiyey in uu tartanka ku soo dhamaad guul.
Abaal marinada ugu sareeyey oo loogu tala galay ciyaartoyda ayaa waxaa lagu sharfay madaxda Somaliyeed in aay guddoon siiyaan ciyaartoyda.
Sentor Shukri Adan Camey oo guddonsiisay koobka kaalinta 1aad, xildhibaan Maryan Haarun oo iyada guddoonsiisay Koobka kaalinta 2aad iyo Daljir Abya ladane oo iyadana guddonsiisay koobka ciyaar wanaag ciyaartoy ka tirsana Kooxda kitchner.
Waxaa sidoo kale magaalada Toronto wali ka socda tartankii cayaaraha kubadda cagta ee SOMALIWEEK oo ay soo qabanqaabiyeen ururka TODAY oo ah urur ka dhisan magaalada Toronto. Tartankaan ayaa waxaa la soo gabagabeyndoonaa maalinta Axadda ee bishan July 16keeda. Halkaan kala soco gabagabada cayaarahaas.
7/11/2017 11:51 AM EST
Talaado, July, 11, 2017 (HOL) – Xog-hayaha Arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa gaaray magaalada Doxa ee dalka Qatar, isagoo isku dayaya in uu dhex dhexaadiyo xiisada diblomaasiyadeed ee u dhaxeeyay Qatar iyo Xulafada uu hoggaaminayo Sacuudiga.
DAAWO: Madaxweynaha Jubaland oo ka warbixiyay shirkii Golaha amniga Qaranka ee Muqdisho
7/11/2017 11:36 AM EST
Talaado, July, 11, 2017 (HOL) - Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland oo mudooyinkii u danbeeyay ku maqnaa magaalada Muqdisho halkaa oo uga qeybgalay shirkii golaha amniga Qaranka ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose.
Xisbiyada KULMIYE iyo WADANI oo digniin loo jeediyay
7/11/2017 11:01 AM EST
Talaado, July, 11, 2017 (HOL) – Guddidda anshaxa ilaalinta habsami u socodka arrimaha doorashooyinka, ayaa dhaliilo usoo jeediyey labadda xisbi ee KULMIYE iyo WADDANI,isla markaaana ugu baaqay inay joojiyaan loolanka ayka dhex bilaabeen qaadashadda diiwaangelinta.
Ganacsiga magaalada Boosaaso oo maalintii Afaraad xiran
7/11/2017 10:51 AM EST
Talaado, July, 11, 2017 (HOL)– Waxaa wali xiran ganacsiga magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, kaddib canshuuro dheeraad ah oo lagu soo rogay ganacsatada.
Magaalada Jowhar maamulayaal Iskuul oo xabsiga la dhigay
7/11/2017 9:03 AM EST
Talaado, July, 11, 2017 (HOL) - Wararka naga soo gaaraya magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in xabsiga la dhigay maamulka 7 Iskuulada oo ku yaala magaalada, kaddib markii ay tageen deegaan ay maamulaan Al-Shabaab.
Puntland oo qabatay dhalinyaro ay ku eedeeyeen in ay ku biiri lahaayeen Al-shabaab
7/11/2017 8:50 AM EST
Talaado, July, 11, 2017 (HOL) - Ciidamada amniga dowlad gobolleedka Puntland ayaa gacanta ku soo dhigay 14 dhanlinyaro ah oo sida ay shegeen damacsanaa in ay ku biiraan xoogagga Al-shabaab ee ka dagaalama gobolka Bari.
Ciidamada AMISOM oo ka guuraya mid ka mid ah saldhigyadoodii ugu weynaa Muqdisho
7/11/2017 6:06 AM EST
Talaado, July, 11, 2017 (HOL) - Ciidamada AMISOM ayaa bilaabay in ay ka guuraan mid ka mid ah fariisimihii ugu weynaa ee ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho, gaar ahaan dhismaha Jaamacaddii Gaheyr ee ku taal degmada Wadajir.
Burcad badeeda Soomaalida oo la tuhusan yahay in ay taageeraan ururka Daacish
7/11/2017 4:50 AM EST
Talaado, July, 11, 2017 (HOL) - Kooxaha burcadbadeeda Soomaalida ayaa lagu eedeeyay in ay taageeraan Ururka Daacish ee ka dagaalanta dalalka Ciraaq iyo Siiriya.
Soomaaliland :Dad la qabtay iyaga oo faqaya qabri uu ku aasnaa wadaad caan ah
7/11/2017 2:20 AM EST
Talaado, July, 11, 2017 (HOL)- Ciidamada amniga Somaliland ayaa xabsiga u taxaabay dad lagu eedeeyey inay faqayeen qubuuro ay ku aasan yihiin wadaad caan ka ah degmadda Arabsiyo.
Mareykanka oo soo dhaweeyay guusha Mosul ee ciidamada Ciraaq
7/11/2017 2:15 AM EST
Talaado, July, 11, 2017 (HOL)- Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu hambalyeeyey Iraq, Ra’isulwasaaraheeda iyo ciidanka amaanka xoreynti ay kooxda Daacish ka xoreeyeen magaalada Mosul.
Maleeshiyaad ka tirsan Daacish oo lagu dilay dalka Masar
7/11/2017 2:10 AM EST
Talaado, July, 11, 2017 (HOL)- Booliska dalka Masar ayaa sheegay in ay dileen lix ruux oo looga shakisanyahay in ay ka tirsanaayeen kooxda Daacish, kaddib iska horimaad dhexmaray malleeshiyadani iyo cidamada booliska.
Top U.S. diplomat voices support for Somalia in fighting Al-Shabaab -Xinhua
7/11/2017 6:40 PM EST
MOGADISHU, July 11 (Xinhua) -- U.S. Secretary of State Rex Tillerson has expressed Washington's support towards flushing out Al-Shabaab militants from Somalia.
IMF Management Completes the Second Review under the Staff–Monitored Program for Somalia -IMF
7/11/2017 5:46 PM EST
Syrian Observatory has 'confirmed information' that Islamic State chief killed -Reuters
7/11/2017 9:45 AM EST
COMMUNIQUE OF THE NATIONAL SECURITY COUNCIL -Villa Somalia
7/11/2017 8:59 AM EST
The National Security Council has praised the good work done by the central government on security issue particularly stabilization of the capital, and strengthening political relations between the central government and regional states.
Top US diplomat lands in Qatar, hoping to help end Gulf rift -AP
7/11/2017 8:46 AM EST
EU and its partners supports training of livestock quarantines practitioners in Somalia -HOL
7/11/2017 8:38 AM EST
'I'm With The Banned': Musicians hit by Travel Ban respond with music -Carbonated.TV
7/11/2017 7:29 AM EST
Sporadic clashes continue in Mosul after victory declared -AP
7/11/2017 6:54 AM EST
CNN Exclusive: Somali pirate kings are under investigation for helping ISIS and al-Shabaab -CNN
7/11/2017 5:04 AM EST
Hundreds of camels die of thirst in the desert: Qataris kicked off farms in Saudi Arabia amid rift between Gulf nations are unable to save their animals -Daily Mail
7/11/2017 2:26 AM EST
Minnesota Health Dept. seeks extra $600K to stop spread of measles, tuberculosis, syphilis -Star Tribune
7/11/2017 2:19 AM EST
Ethiopia must allow protest probe, end crackdown: 38 E.U. MPs pile fresh pressure -Africa News
7/11/2017 2:14 AM EST
'It was the happiest moment': Asylum seekers who took risky Central American corridor cross into Canada -CBC
7/11/2017 1:34 AM EST
Food Crises Getting Worse in Somalia, Kenya -VOA
7/11/2017 1:30 AM EST
Sudan won’t accept any decision other than permanent lift of U.S. sanctions: FM -Star Tribune
7/11/2017 1:26 AM EST
Female Muslim students biggest victim of discrimination in Austria, report says -Daily Sabah
7/11/2017 1:22 AM EST
Vaccinations and autism: Goal is prevention, but there's a need for two-way discussion -Star Tribune
7/11/2017 1:16 AM EST
Somali pirates are under investigation for supporting ISIS, report says -Vice
7/11/2017 1:00 AM EST
Minnesota Rep. Omar to appear on 'The Daily Show with Trevor Noah' -Star Tribune
7/11/2017 12:51 AM EST
Somali journalist detained without charge -IFJ
7/11/2017 12:42 AM EST
Australian Journalist’s Trump Teardown Goes Viral Amid Interest in G-20 -Nytimes
7/11/2017 12:26 AM EST